I-Univision ayizukuyikhupha iMiss yase-USA ngenxa yobudlelwane noDonald Trump - Usnews
I-Univision ayizukuyikhupha iMiss yase-USA ngenxa yobudlelwane noDonald Trump
UCharlie Neibergall / AP
I-Univision ithe ngoLwesine ngeke ibonise ukhuphiswano oluzayo lukaMiss USA - umbutho wabazali bakhe uphantsi kukaDonald Trump - emva kokuba usozigidi wathi abaphambukeli baseMexico ngabadlwenguli abazisa iziyobisi kunye nolwaphulo-mthetho eU.S.
Inkampani yathi yayiqhawula ubudlelwane kunye noMbutho we-Miss Universe emva kweTrump 'intetho ethukayo malunga nabafuduki baseMexico.'
'Kwi-Univision sibona okokuqala indlela yokuziphatha emsebenzini, ukuthanda usapho, imilinganiselo eqinile yenkolo kunye nendima ebalulekileyo abafuduki baseMexico nabaseMexico-baseMelika abanayo kwaye baya kuqhubeka benayo ekwakheni ikamva lelizwe lethu,' yatsho iSpanish. uthungelwano lukamabonakude.
Xa uTrump ebhengeza isicelo sakhe sobumongameli kwiveki ephelileyo, wathi iMexico ithumela kuphela abantu abanengxaki abazisa iingxaki zabo e-United States kwaye bathembisa ukwakha 'udonga olukhulu' ecaleni komda.
'Beza neziyobisi, bazisa ulwaphulo-mthetho,' watsho kwintetho yakhe eTrump Tower eNew York. 'Bangabadlwenguli kwaye abanye, ndicinga ukuba, bangabantu abalungileyo, kodwa ndithetha nonogada bomda kwaye bayasixelela ukuba sifumana ntoni.'
Inkampani yosasazo yathi icandelo le-Univision News liza kuqhubeka nokubonelela ngokugubungela bonke abagqatswa, kubandakanya noTrump. I-Univision ithe ayizukusebenza kuzo naziphi na ezinye iiprojekthi ezibotshelelwe kuMbutho weTrump.
Imvumi yaseColombia yereggaeton uJ Balvin bekulindeleke ukuba acule kukhuphiswano lukaMiss USA, kodwa ngoLwesithathu uye waphuma kulo mboniso ngenxa yezimvo zikaTrump. Yayiza kuba yinkqubo yakhe yokuqala yesizwe, utshilo uBalvin Ibhodi yezaziso .
'Kodwa sithetha ngeengcambu zethu, inkcubeko yethu, imilinganiselo yethu,' wongeze watsho. 'Oku akukokukhalimela, kodwa kumalunga nokubonisa ubunkokeli ngoxanduva loluntu. Amagqabaza akhe ayengekho nje ngabantu baseMexico, kodwa malunga nawo onke amaLatins ngokubanzi.'
Ukhuphiswano lukaMiss USA kulindeleke ukuba luqhutywe ngomhla weshumi elinesibini kweyeKhala.
Urhulumente waseMexico akafuni ndithethe ngemeko embi yomda kunye nezivumelwano zorhwebo ezoyikisayo. Ukunyanzela i-Univision ukuba indenze ndiyeke- hayi indlela!
UDonald J. Trump @realDonaldTrump
I-Univision ifuna ukurhoxa kwikhontrakthi esayiniweyo ye-@MissUniverse kuba ndibhentsise izivumelwano zorhwebo ezoyikekayo ezenziwa yi-US neMexico.
Ndiyayithanda iMexico kodwa hayi izivumelwano zorhwebo ezingalunganga ezenziwa yi-US ngobutyhakala ngayo. Imbi kakhulu kwimisebenzi yase-US, ilungile kuphela eMexico.
UBenjamin moore umbala ohlaza
Izipho zeValentines zomfazi
penda izimvo zangasese
imibala enkulu yegumbi lokuhlala
izindlu zecraigslist ziyathengiswa